War Jiraaba Cakawgguu Iman! – Rasaasa News
Apr 26, 2011 ayaa hore u codsaday in saxiixa nabada ee u dhaxeeya dawlada dhexe Ethiopia iyo ONLF, ee la heshiiyey dawlada Ethiopia dhamaadkii sanadkii hore, in ayna Ethiopia saxiix kale la samaynin kooxo sheegta ONLF., marka uu dhaco, Ururka ONLF, War Jiraaba Cakawgga Ayuu Iman!
Maxaa ka jira in uu xidhiidh xaga khadka telefoonka ah dhexmaray waftigii ka socday dawlada degaanka Somalida Itobiya iyo xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, xiligii ay waftigu maraysay dalalka reer galbeedka, lana kula kulmaysay qurba-joogta reer Itobiya?
Warar hoose oo aanu ka helay ilo xog ogaal ah, ayaa waxay na soo gaadhsiiyeen war xaqiijinaya in ay khadka telefoonka ku wadahadleen waftigii ka socday dawlada degaanka Somalida Itobiya iyo xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil.
Warku wuxuu sheegayaa in khadka telefoonka la isugu xidhay waftiga iyo xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo kala jooga afar wadan.
Ila wareedyadu waxay ka gaabsadeen in ay shaaciyaan magacayada labada dhinaca ee wada hadlay, waxayna ku gaabsadeen oo kaliya wadahadalkii dhexmaray madaxda degaanka Somalida Itobiya iyo xubnaha ugu sareeya kooxda Jwxo-shiil, oo uusan Jwxo-shiil ku jirin.
Xubnaha kooxda Jwxo-shiil, ee ka qayb galay wadahadalka khadka telefoonka, ayaa kala jooga dalalka Australia, Ingriiska, Maraykanka iyo South Afrika. Lama sheegin waftiga dawlada degaanka Somalidu dalalka reer galbeedka dalka ay kaga sugnaayeen, kolka khadka telefoonka lagu wadahadlayey xubnaha kooxda Jwxo-shiil.
Ilaha aanu warka ka helay waxay noo xaqiijiyeen, in ay is af garteen waftiga dawlada degaanka Somalida Itobiya iyo xubnaha kooxda Jwxo-shiil. Ila wareedyadu waxay ka gaabsadeen mar labaad in ay shaaciyaan wixii laysku af gartay, iyaga oo yidhi “war jiraaba cakawguu iman.”
Dhinaca kale, xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo uu Jwxo-shiil, ka mid yahay, ayaa kulan qarsoodi ah kula leh magaalada Offenburg ee dalka Jarmalka, saraakiil ka socda dawlada Itobiya. Kulanka ayaa ka socdaa Hotel Cuno iyo Jiif ah, oo aan laga bixi karin inta uu shirku socdo, saxaafadana loo diiday.
Sida ay wararku sheegayaan xukuumada Eritrea iyo dawlada Ethiopia, ayaa waxaa heshiis ka dhex wada dawlada Masar oo iyadu xiisaynaysa in ay dhamaato xurgufta biyaha wabiga Nile ee u dhaxaysa iyada iyo Ethiopia. Masar waxay jeceshahay in ay heshiis dhex dhigto Ethiopia iyo Eritrea, dabadeedna ay u soo jeedsato saaxiibtinimada iyada iyo Ethiopia.
Waxaana muuqata in ay xukuumada Eritrea raali ka tahay wada xaajoodka qarsoodiga ah ee u dhaxeeya dawlada Ethiopia iyo kooxda Jwxo-shiil. Eritrea, ayaa waday dhibaatada colaada iyo degaanaasho la,aanta ka jirta guud ahaan dalka Ethiopia, gaar ahaana gabalka Ogaden.
Ururka ONLF, ee la heshiiyey dawlada Ethiopia dhamaadkii sanadkii hore, ayaa hore u codsaday in saxiixa nabada ee u dhaxeeya dawlada dhexe Ethiopia iyo ONLF, marka uu dhaco, in ayna Ethiopia saxiix kale la samaynin kooxo sheegta ONLF. Waxaan la ogayn waxa ay ka yeeli doonto dawlada Ethiopia, hadiiba ay nabad qaadato kooxda Jwxo-shiil, oo iyadu hore u diiday in ay heshiis nabadeed la yeelato daawlada Ethiopia.
Waxaynu isha ku hayn doonaa waxa ka soo baxa wadahadalka qarsoon ee u dhaxeeya dawlada Ethiopia iyo kooxda Jwxo-shiil.